Construction ntupu ịgbado ọkụ Machine
Roll ntupu welded igwe
Panel ntupu ịgbado ọkụ Machine
Nwee ume Mesh wleding Machine
Nsu ngere ịgbado ọkụ Machine
3D ngere welded ntupu Machine
358 Security ngere ịgbado ọkụ Machine
Animal onu ịgbado ọkụ Machine
Welded waya ntupu igwe
Steel ji kpachie oghere Machine
Security fencing Ime igwe
Chain Link ngere Machine
Barbed Waya Ime Machine
Concertina Aguba waya nwere ogwu
Igwe nkpuchi ahihia ahihia ahihia
Hexagonal Waya Netting Machine
Gabion ntupu igwe
Chicken waya netting igwe
Gbasaa Metal ntupu Machine
Hebei Jiake ịgbado ọkụ Equipment Co., Ltd.
Elekwasị anya na waya ntupu ígwè n'ichepụta
Ngbanwe igwe eji agbanwe agbanwe na teknụzụ Advanced weld na ụlọ ọrụ
JIAKE Machinery-Best ika emeputa nke waya ntupu ígwè na China
Afọ 20 nọgidere na-emepe emepe ahụmahụ na waya ntupu ígwè emeputa ụlọ ọrụ.
Ọkaibe customization ikike maka gị kpọmkwem ngwaahịa mkpa.
Hebei Jiake ịgbado ọkụ Equipment Co., Ltd. e guzobere na 1999 na emi odude ke Anping mba, Hebei n'ógbè, China. Ọ bụ a waya ntupu igwe rụpụta technology ngwa ngwọta na-eweta na-agba mbọ na-enye waya ntupu nhazi ngwọta maka zuru ụwa ọnụ ọrụ.
Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, JiaKE ígwè aghọwo China si eduga emeputa nke waya ntupu akụrụngwa. Na ubi nke elu-ọgwụgwụ waya ntupu welder n'ichepụta, Jiake ígwè eguzobewo ya na-eduga ịgbado ọkụ technology na ọkachamara. Na ubi nke waya ntupu ịkpa ákwà ígwè, anyị nwekwara ike zuru okè nkà na ụzụ Filiks na ọkachamara ọrụ ìgwè site na imekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ na-emepụta.
JIKE WIRE MESH MAKA
Gbado anya n'inye ihe ngwọta maka igwe ịgbado ọkụ na ntaneti akwa.
- Lekwasị anya n’inye ihe ngwọta maka igwe ịgbado ọkụ na igwe eji igwe akwa.
Chain Link Fencing Machine, Chain Link Mgba ịgbado ọkụ Machine, nwee ume ntupu ịgbado ọkụ Machine, nwee ume ngwe ịgbado ọkụ Machine, ngwaike ngere ịgbado ọkụ Machine, Barbed Waya igwe, gbasaa Metal ntupu Machine, na Waya ịbịaru igwe, wdg.
Ngwaahịa na teknụzụ enwetawo ikikere mba, ma nwee akwụkwọ CE, akwụkwọ FTA, ,dị E, Fdị F. Igwe eletriki igwe, nhazi omenala gị agaghị enwe nsogbu.
KEMGBE afọ 1999
Mba ndi oru
EFỌD OF N’IME Anyị
Ahịa ụwa ahịa
Na ahịa esenidụt, JIAKE Machinery eresịla ihe karịrị mba 100 na mpaghara gburugburu ụwa.
The ndụ na agbasa ozi n'ikuku nke Jiake Waya ntupu Mac ...
Xutuan Industrial Mpaghara, Anping, Hebei, China